Makakatanwa eZita reMDC-T Otsviriridza Pakati paVaChamisa naMuzvare Khupe
Zvikwata zviviri zveMDC-T zviri kurwira kushandisa zita rekuti MDC-T zvapinda parumana nzombe zvichitevera danho ratorwa neZimbabwe Electoral Commission rekuti hapana bato riri kuzobvumidzwa kuti rive nevanhu vanodarika mumwe chete vachakwikwidza musarudzo pachinzvimbo chimwe chete.
Vachitaura neStudio7 pamuzinda weZimbabwe Electoral Commission, kana kuti ZEC, sachigaro wekomisheni iyi, Amai Priscilla Chigumba, vati hapana bato richabvumidzwa kuisa vanhu vaviri kana kudarika kuti vakwikwidze pachinzvimbo chimwe chete.
Izvi zvinouya apo MDC-T inotungamirwa naVaNelson Chamisa iri kurwisana nechimwe chikwata chiri kutungamirwa naMuzvare Thokozani Khupe panyaya yekushandisa zita rekuti MDCT.
Mutevedzeri wasachigaro muMDC-T inotungamirwa naVaChamisa, VaMorgen Komichi, vati sebato vatotora matanho akawanda anosanganisira kuenda kumatare kuitira kuti vacherechedzwe nezita rekuti MDC-T.
Asi mutauriri weMDC-T iri kutungamirwa naMuzvare Khupe, VaObert Gutu, vati vacharwa semvumba kuti varambe vachishandisa zita iri.
Kusawirirana pakati paVaChamisa naMuzvare Khupe kwakatanga pakafa vaimbova mutungamiri webato iri VaMorgan Tsvangirai muna Kukadzi mushure mekurwara nechirwere chegomarara.
VaChamisa ndivo vakasarudzwa nekomiti yepamusoro-soro mubato iri pakati pemakongiresi yeNational Council kuti vave mutungamiri webato zvichitevera kushaya kwaVaTsvangirai.
Asi Muzvare Khupe vanoti ndivo vakafanobata matomhu emutungamiri webato vakamirira kuti paitwe kongiresi yekutsvaga mutungamiri mutsva sezvo VaTsvangirai vakaenda kwamupfiganebwe vachiti ndizvo zvinotaura bumbiro ravo remitemo.
Muzvare Khupe nevamwe vavo vari kuita kongiresi yavo musi wa 21 Kubvumbi vachiti vari kutevedza zvinodiwa nebumbiro remitemo.
Asi VaChamisa nevamwe vavo vakaramba kuenda kukongiresi vachiti hapana nguva yekuita izvi sezvo nyika yatarisana nesarudzo.